Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo » I-Russia ukuba yongeze iModyuli yoKhenketho kwiSitishi sayo esiyiLandelayo
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Ukhenketho emajukujukwini • Technology • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Intloko yeRussia State Space Corporation (Roscosmos) nguDmitry Rogozin
I-Roscosmos ayizukubandakanyeka kwiinqwelomoya ezingekho mthethweni, utshilo umphathi wasemajukujukwini waseRussia, kodwa iarhente yasemajukujukwini yaseRussia izakuzibandakanya ekuphuhliseni ukhenketho lwendawo njengenxalenye yenkqubo yokulinga ye-orbital.
Uxanduva lwaseRussia lokuthatha inxaxheba kwinkqubo ye-ISS luphela ekupheleni kuka-2025.
Ngo-Epreli, ngo-2021, iRussia Prsident yamkela izicwangciso zesikhululo seNkonzo yeOrbital Orbital.
Umphathi wamajoni waseRussia ucebisa ngendalo eyahlukileyo yemodyuli yesikhululo sabakhenkethi.
Amagosa earhente yasemajukujukwini aseRussia acebise ukuba kwakhiwe imodyuli ekhethekileyo yabakhenkethi kwiSikhululo seNkonzo yaseRbital Orbital (ROSS), indawo efumana inkxaso-mali eMoscow kwisikhululo seNdawo saMazwe ngaMazwe esigugileyo (ISS).
IRashiya ukongeza imodyuli yabakhenkethi kwisitishi sayo sendawo elandelayo
Ngokwentloko ye I-Russian State Space Corporation (iRoscosmos) UDmitry Rogozin, iBhunga lezeNzululwazi nezoBugcisa laseRoscosmos lixoxe ngendalo yeROSS kwintlanganiso yayo ngoJulayi 31.
"Ndicebise ukuba le projekthi kufuneka ibandakanye ukwenziwa kwemodyuli eyahlukileyo yeendwendwe," yatsho inkosi yaseRoscosmos.
Ngezibophelelo zaseRussia zokuthatha inxaxheba kwinkqubo ye-ISS eza kuphela ngo-2025, bekudala kukho intelekelelo malunga nekamva lesikhululo sendawo esihlala abantu kuphela.
Ngo-Epreli, ngo-2021, uMongameli wase-Russia u-Vladimir Putin wavuma izicwangciso ze-Russian Orbital Service Station, wasayina kwisindululo sesikhululo sendawo esineemodyuli ezintathu ukuya kwezisixhenxe.
Ukuba isigqibo sithathiwe sokubandakanya icandelo labakhenkethi kuphela, liya kuqhubeka nesiko lokuthatha inxaxheba kweRussia kukhenketho lasemajukujukwini. Ngo-2001, injineli yaseMelika uDennis Tito waba ngowokuqala kubakhenkethi bendawo yokuxhasa ngezemali uhambo lwakhe oluya emajukujukwini, efika kwirokethi yaseRussia iSoyuz TM-32.
I-Tropical Storm Elsa idlula kufutshane neFlorida Keys nge ...
I-Air Canada iphehlelela inkonzo engapheliyo phakathi ...
Isikhululo senqwelomoya saseBudapest: I-Runway Run Run ivuliwe!
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica: Imizamo ephindiweyo yoku ...
IMEX America: Ukuba sifuna into entsha yesiqhelo, siza ...
IMalta ibonakaliswe yiManchester United: Iintsomi eMalta